Maxaa Saakay ka cusub Sheekada Sanchez, Aubameyang iyo Mkhitaryan? – Cayaaraha dunida
Maxaa Saakay ka cusub Sheekada Sanchez, Aubameyang iyo Mkhitaryan?
Waxaa weli jiitamaya Sheekada Suuqa ee Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang iyo Henrikh Mkhitaryan, balse Maanta oo Jimce ah ayay u badan tahay in saxiixyada qaar ay soo afjarmi doonaan.
Sanchez ayaa lagu wadaa in saacadaha yar ee na soo aadan uu tijaamada caafimaad u maro kooxda Man United.
Jose Mourinho ayaa doonaya in Maanta oo Jimco ah la soo gabo gabeeyo saxiixa dhaliyaha reer Chile si loo diiwaan galiyo isla markaana uu qeyb uga noqdo shaxda ay berito ku wajahayaan kooxda Burnley.
Sanchez ayaa kala heshiiyay Red Devils Mushaar uu usbuuciiba ku qaadan doono adduun dhan 505,000 oo bound sidoo kale Shirkadda Adidas ayaa durba bilowday inay iibiyaan maaliyada laacibka ee Man United oo lagu xardhay Lambarka 7-aad ee lagu wado inuu xirto marka uu ku soo biiro Old Trafford.
Sikastaba, Waxaa isku xiran saxiixa Sanchez iyo Mkhitaryan.
Laacibka qadka dhexe ee Armenia iyo wakiilkiisa Mino Raiola ayaa soo gaaray London si ay u soo afjaraan heshiiska ay ugu biirayaan Arsenal.
Wakiilka Mayilka adag ee Mino Raiola ayaa horey u sheegay inay qasab tahay in lagu heshiiyo in kaliyantigiisa uu cago dhigto Emirates ka hor inta aan la dhammeystirin heshiiska Sanchez.
Laakiin Jose Mourinho ayaa la warinayaa inuu ka fikirayo suuro galnimada uu Ed Woodward ku waydiisan lahaa in la soo afjaro sheekada Sanchez xitaa haddii la isku af garan waayo heshiiska uu Mkhitaryan ku aadayo dhanka kale.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa isna aad ugu sii dhawaanaya inuu Gunners ugu soo biiro adduun dhan 53-milyan inkastoo ay isku kacsan yihiin kooxdiisa Dortmund.
Arsenal ayaa diyaar u ah inay xiddiga reer Gabon jeebka ugu shubto mushaar dhan usbuuciiba 170,000 oo bound si ay ugu badesho booska Sanchez.
Aubameyang ayaa loo gacan galin doonaa heshiis 3-sano iyo bar uu ku joogi doono Emirates taa oo ka dhigi doonta laacibkii ugu qaalisanaa taariikhda kooxda isagoona 1-milyan dheeran doona Alexandre Lacazette.